November 2011 | အ င်္လ ကာ ည
Easy way to speak English (17)
Labor Law in Myanmar (3)
မှားယှငျးတတျသညျ့ သဒ်ဒါနှငျ့ ဝေါဟာရအသုံးအနှုနျးမြား (8)
လေ့လာစရာ အင်္ဂလိပ်စာ (27)
"မေတ္တာ" သည်သာလျှင် ဖြစ်ပါစေ
ဖူးမြော် ကြည်ညို ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်
Switch to the new look (Gmail)
“မလုပ်ရင် မတတ်ပါ၊ လုပ်မှ တတ်မှာပါ”
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် သူငယ်ချင်းများအားလုံး သို့
2:33 AM | Labels: ရင်ကိုဖွင့်တဲ့ " သော့ "
နေလာတဲ့အခါ …………. နှင်းပြာကလေးတွေ
ပန်းကလေးတွေ ………….. မကြွေပါနဲ့
အချစ် သာလျှင် ဖြစ်ပါစေ
ရေးသားသူ alinkarnya Links to this post
6:00 AM | Labels: မမေ့အပ်သည်များ
မြန်မာနိုင်ငံတော်ကို စတုတ္တအကြိမ်မြောက် ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော် ပင့်ဆောင်လာပြီးနောက် ကျနော်အနေဖြင့် ပထမဆုံးအကြိမ်ဖူးမြော်ရခြင်းပါ။ ယခင်အချိန်တုန်းကအကြောင်းမျိုးစုံကြောင့် မဖူးမြော်ဖြစ်ခဲ့ပဲ ယခု နေပြည်တော် တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ကြုံကြိုက်လာသဖြင် ၀မ်းပန်းတသာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်..........
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၆)ရက်မှ(၂၁)ရက်နေ့တိုင် အများပြည်သူ ဖူးမြော်ကြည်ညိုရန်အတွက် နေပြည်တော် ဥပ္ပါတသန္တိစေတီတော်တွင် ကိန်းဝပ်စံပယ်နေပါတယ်။
ကျနေ်ာလည်း ဒီနေ့ သွားရောက်ဖူးမြော်တော့ ဥပ္ပါသန္တိစေတီတော်တွင် ဗုဒ္ဓစွယ်တော်ဖူးမြော်ရန်အတွက်
မုခ်ဦးအ၀င်ဝကိုလှမ်းမြင်တော့ တာဝန်ကျ ယာဉ်ထိန်းရဲများနှင့် မဏ္ဍပ်များရှိ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များမှလည်း လုံခြုံရေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေရတာကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ လော်စပီကာမှလည်း ဘုရားဖူးပြည်သူများအား မုခ်ဦးပေါက်မှ ဘုရားခြေတော်ရင်းရောက်သည်အထိ တော်ဝင်ကားစီစဉ်ရေးအဖွဲ့မှ ကုသိုလ်ယူပြေးဆွဲနေကြောင်၊ ဘုရားရင်ပြင်တော်ပေါ်သို့ လက်ကိုင်ဖုန်း၊ လက်ကိုင်အိတ်အကြီးအသေး၊ ဖိနပ်၊ ဘောပင်၊ ဆေးလိပ်၊ ကွမ်းယာ ယူဆောင်ခွင့်မပြုကြောင်း ကြော်ငြာပေးလျှက်ရှိပါတယ်။
(စကားမစပ်. ယာဉ်ရပ်နားရန်နေရာမှာ ဆိုင်ကယ် ၊ကား တစ်စီး(၃၀၀)ကျပ်။ ဖုန်းယူလာမိသည်ရှိသော် ဂိတ်တွင် ဖုန်းထိန်းသိမ်းခ(၁၀၀၀)၊ ဖိနပ်အပ်ခ တစ်ရံ(၁၀၀)၊ ပါ)
တစ်ချို့ကလည်း မုခ်ဦးပေါက်မှ ဘုရားခြေတော်ရင်းသို့ လမ်းလျောက်ရင်းသွားသလို၊ တစ်ချို့ကလည်း တော်ဝင်ကားကိုစီး၍သွားကြပါတယ်..
ကျနေ်ာတို့မိသားစုကတော့ ဖိနပ်ကို ကားပေါ်မှာပဲ ထားပြီး မုခ်ဦးပေါက်မှ ဘုရားခြေတော်ရင်းသို့ လမ်းလျောက်ဖူးမြော်ရင်း ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကြည်နူးစရာပါပဲ။ ပြည်သူအားလုံးရဲ့မျက်နှာမှာ ပြုံးပျော်ရွှင်နေကြပါရဲ့။
ဘုရားရင်ပြင်ပေါ်တွင် တက်ရန်တွင် လုံခြုံရေးဂိတ်က စောင့်လို့ကြိုဆိုပါတယ်။ အမျိုးသားက ၀င်ပေါက်တစ်ပေါက်၊ အမျိုးသမီးက ၀င်ပေါက်တစ်ပေါက် စစ်ဆေးပြီးရင်တော့ သူလမ်းကြောင်းအတိုင်း ဘုရားစောင်းတန်းတစ်လျောက် တက်ရောက်ကြပါတယ်။ (ဓါတ်လှေခါးသုံးခွင့်ပေးမထားပါ)
ရင်ပြင်ပေါ်ရောက်ရောက်ခြင်း ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်ကို LCD ဖြင့် ပြသထားပြီး အောက်ခြေတွင် Sky Net မိသားစုလှူဒါန်းပူဇော်ထားကြောင်း တွေ့ရပြန်တယ်။ ဥပ္ပါသန္တိစေတီတော်လှိုဏ်ဂူတော်အတွင်း စွယ်တော်ဖူးမြော်ရန် အတွက် တန်းစီနေရင်း ကျနေ်ာတို့မိသားစုလည်း တန်းစီဇယားဆွဲကြရပါတယ်... ဖြည်းဖြည်းနဲ့ လှိုဏ်ဂူတော်ထဲရောက်တော့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်ကို TV၊ Projector တွေနဲ့ပြသထားပြီး လုံခြုံရေးအပြည့်အ၀နဲ့ တစ်ဖြည်းဖြည်းလျောက်ရင်း ဖူးမြော်ကြည်ညိုရပါတယ်။
ဖူးမြော်ကြည်ညိုပြီး ပြန်အထွက် ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်အလှူခံပုံးကိုတွေ့၍ သမီးရည်မွန်မျိုးမြင့် က အလှူငွေ (၅၀၀) လှူဒန်းပြန်တယ်။ နောက်နည်းနည်း ထပ်လျောက်တော့ တစ်သိန်းအထက်နှင့်ရွှေငွေကျောက်မျက်ရတနာ လှူဒန်းရန် ဆိုတဲ့ အလှူခံမဏ္ဍပ်ကိုတွေ့လိုက်ရပြန်တယ်။ မဏ္ဍပ်လူတွေထွက်လာတော့ လက်ထဲမှာ ဗုဒ္ဒမြတ်စွယ်တော် ပုံလေးတွေကို တွေ့လိုက်ရတော့ အိမ်မှာကြည်ညိုချင်တဲ့အတွက် သွားရောက်မေးမြန်းစုံစမ်းပြီး အလှူတော်ငွေ (၃၀၀၀) လှူပြီးမှ မြတ်စွယ်တော်ပုံလေးအသေးတစ်ပုံကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပုံအကြီးလေးမရဘူးလားလို့မေးကြည့်တော့ တစ်သောင်းအထက်လှူမှ ပုံအကြီးရမယ်ဆိုတာကို သိလိုက်ရပြန်တယ်။
ကျနေ်ာ မဏ္ဍပ်က ပြန်အထွက် ဘုရားဖူးတစ်ချို့ထဲက အဒေါ်ကြီးရဲ့လက်မှာ (၅၀၀)တန်လေးတစ်ရွက်ကိုင် ထားပြီး "ဒီမယ့် ငါတူ ဘယ်လောက်လှူမှ မြတ်စွယ်တော်ပုံရမှာလဲတဲ့" ။ ကျနေ်ာလည်း (၃၀၀၀)လှူခဲ့တဲ့အတွက် ဒီပုံလေးရပါတယ် ။ တစ်ချို့ကလည်း (၁၀၀၀)လှူပါတယ် ဆိုပြီး ကျနော်လည်းဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့
ဘယ်လိုဖြစ်ကျန်ခဲ့သည် မသိတော့ပါ.......(ဒါပေမဲ့ လူတော်တော်များများကတော့ ၄င်းမဏ္ဍပ်ရှေ့မှာတော့စည်ကား လျှက်ရှိပါတယ်)
နောက်ဆုံး ကျနေ်ာတို့မိသားစု ဘုရားရင်ပြင်တော်ပေါ်က ပြန်ဆင်းပြီး အိမ်ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။
မဖူးမြော်ရသေးသော မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများအားလုံးအား ကြည်ညိုသဒ္ဒါပွားမိရန်ရည်ရွယ်၍ ဖော်ပြပေးလိုက် ပါတယ်။
5:59 AM | Labels: နည်းပညာအကြောင်း
Software မလိုဘဲ English လိုအသံထွက် အား နားထောင်ရင်း လေ့ကျင့်မယ်။
Software တွေတကူးတကရှာပြီး English လို အသံထွက်လေ့ကျင့်စရာမလိုပါဘူး..
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိချင်တဲ့စကားလုံးကို ရိုက်ထည့်ပြီး အသံထွက်ခိုင်းလိုက်ပါ။
ဒါကို ကိုယ့်က နားထောင်ပြီး အသံထွက်လေ့ကျင့်ပေါ့..
Control panel ထဲမှာရှိတဲ့ Speech မှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်.။
Start / Control panel မှတဆင့် Speech ကိုရွေးချယ် Click ပေးပါ။ ပုံပါအတိုင်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
တစ်ချို့က Control panel မှာ Category View နဲ့ပေါ်နေရင် Sounds, Speech and Audio Devices မှာ
"you have selected Microsoft Sam as the computer's default voice" ဆိုတာကို Delete လုပ်လိုက်ပြီး ကိုယ်အသံထွက်စေချင်တဲ့ English စာသားကိုရိုက်ထည့်ပြီး Preview voice မှာနှိပ်လိုက်ပါ..တိတိကျကျအသံထွက်ပေးပါလိမ့်မယ်.
တခါနဲ့ အားမရရင် အခေါက်ပေါင်းမြောက်မြားစွာ Preview voice ကိုနှိပ်ပြီး နားထောင် လေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်..
အင်္ဂလိပ်အသံထွက် Software ကိုမှ ခက်ခက်ခဲခဲရှာစရာမလိုဘဲ..လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုလို့ရတဲ့ Speech ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးပြုလိုက်ကြပါလို့သတင်းကောင်းပါရင်း..
12:09 AM | Labels: ရင်ကိုဖွင့်တဲ့ " သော့ "
7:11 PM | Labels: ရင်ကိုဖွင့်တဲ့ " သော့ "
4:45 PM | Labels: နည်းပညာအကြောင်း
အခုတစ်လော ဂျီမေလ်းသုံးရင်းနဲ့ သတိထားမိမလားမသိဘူး
ပုံပါအတိုင်း ဂျီမေလ်းရဲ့ ညာဘက်အောက်ခြေနားမှာ Switch to the new look ဆိုပြီး ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။
ဂျီမေလ်းရဲ့ နဂိုမူလပုံစံကိုမကြိုက်ရင် Switch to new look ကို Click နှိပ်၍ ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်.Click နှိပ်မယ်ဆိုရင် ပုံပါအတိုင်းဆက်လက်ပေါ်လာမည်။
ပြီးတော့ အထက်ပါပုံမှာ ၀ိုင်းပြထားတဲ့ အတိုင်း Switch to the new look ကို ဆက်လက်နှိပ်ပြီး ဂျီမေလ်းရဲ့ ပုံစံသစ်လေးနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါပြီ. စိတ်ဝင်းစားစရာတွေအပြည့်နဲ့ပါပဲ။
About Gmail's new look
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကျနော် ဒီသတင်းကိုဖတ်ပြီးပြီးခြင်း တစ်ချို့သောသူငယ်ချင်းများကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်
အဲ့ဒီတော့ ပြန်ပြီး နဂိုမူလပုံစံ (old look ) ကို ပြန်သွားချင်ရင် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ရှင်းလင်းချက်ပုံပါအတိုင်း
(ပုံမှာအတိုင်း ) Gear wheel (Setting) ကိုနှိပ်၍ Revert to the old look temporarily ကိုနှိပ်ပါ။
ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် ထပ်မံပေါ်လာသောပုံတွင် Revert to the old look temporarily ဆက်လက် Click
နှိပ်ပေး၍ နဂိုမူလပုံစံကို ပြန်လည်ပြောင်းပေးပြီးဖြစ်သွားပါမည်။
1:24 AM | Labels: ဆောင်းပါး
လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် စားဝတ်နေရေးအတွက် လူတိုင်းမှာ အလုပ်ကလေးတွေ ကိုယ်စီ ရှိကြပါတယ်။
တစ်ချို့ကလည်း မိဘလုပ်ကျွေးဖို့၊ မိသားစုအတွက်၊ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံလေးရအောင်၊ တစ်ချို့ကလည်း ဘ၀ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့အတွက် လုပ်ငန်းဝင်ထဲ ၀င်ရောက်လာကြတယ်။ အလုပ်ထဲ ရောက်တော့လည်း လုပ်သက်လေးရလာတယ်၊ ကုမ္ပဏီပါးလေးလည်းဝလာရော စိတ်ထားလေးတွေ ပြောင်းလဲ လာတယ်။ လူအမျိုးစိတ်အထွေထွေဆိုသလိုပေါ့၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ခံယူချက်ခြင်း မတူညီကြတော့။
အလုပ်ကိုဂရုမစိုက်ကြတော့ ပေါ့ပေါ့လေးနေတတ်လာကြတယ်။ အထက်လူကြီးက တာဝန်မပေးဘူးဆိုလျှင် ဘာမှမလုပ်တော့၊ ထိုင်လိုက်စကားပြောလိုက်၊စာဖတ်လိုက် ဒီလောက်ပဲ၊ အလုပ်မခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း ခိုင်းတာကိုပဲလုပ်မယ်၊ မခိုင်းတာကိုမလုပ်ဘူး၊ ငါသက်သာတယ်လို့ တွေးထင်နေတဲ့သူများလည်းရှိကြပါသေး တယ်။
အလုပ်တစ်ခုပေါ်လာလို့ ကိုယ့်ကိုမခိုင်းဘဲ တစ်ခြားတစ်ယောက်ကိုခိုင်းလိုက်ရင်လည်း ငါသက်သာတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့နေသူတွေလည်းရှိကြမှာပါ။ အမှန်ပြောရရင် သက်သာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့လူတွေ လောကမှာ အများကြီး ပဲရှိကြမယ်ထင်တယ်. သူတို့တွေးထင်နေသလိုကော ဟုတ်ရဲ့လားလို့ အတွေးကို စမ်းစစ်ကြည့်စေချင်တယ်။ ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင် Scan ဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်ပေါ့ဗျာ၊
“အခိုင်းခံရတယ်ဆိုတာက တစ်ဖက်ကကြည့်ရင် သင်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြဿနာတစ်ခုကို လက်တွေ့ကိုင်တွယ်ခိုင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။” ပြောရတာက လွယ်ပါတယ်။ အလုပ်တစ်ခုဟာ လုပ်ကြည့်တော့ မှ အခက်အခဲတွေ တွေ့ရတတ်လာတယ်၊ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာ စဉ်းစားတတ်လာတယ်။ ဒီလိုစဉ်းစား ဖြေရှင်းရင်းနဲ့ မှ အလုပ်တစ်ခုကို ပြီးမြောက်အောင် လုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်လာတော့တာပါ။ အဲ့ဒီတော့
မြန်မာလူမျိုးဝန်ထမ်းတွေမှာ အထက်လူကြီးကိုကြောက်တတ်တဲ့ အကျင့်လေးရှိတယ်။ ကြောက်တယ်လို့ပြောတာမကြိုက်ရင် (လေးစားတတ်တဲ့အကျင့်လေးရှိတယ်ပေါ့ဗျာ) လူကြီးနားသိပ်မကပ်ချင်ဘူး။ ကပ်ရင် တစ်ခုခုဖြစ်မှာစိုးလို့ထင်ပါ့။ အဲ့ဒိလိုနေပါများတော့ အထက်လူကြီးက သတိထားမိတတ်ကြတယ်။ သူက ခိုင်းလို့သာလုပ်နေတာ၊ အလုပ်ပေါ်စိတ်ဝင်စားရဲ့လား၊ ပြီးမြောက်ရဲ့လား၊ ဒီတော့ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာလို့ ခိုင်းတော့မယ်ဆိုရင် အဆိုပါဝန်ထမ်းကို သိပ်မစဉ်းတော့ဘူး.၀န်ထမ်းဘက်က ကြည့်ရင် သက်သာသွားတာပေါ့။ တကယ်မှာ အဆိုပါဝန်ထမ်းအတွက် များစွာနစ်နာဆုံးရှုံးပါတယ်။
“လူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ ယုံကြည်မှုမရတာဟာ၊ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်အတွက် အနစ်နာဆုံးအရာ” လို့ဆိုရပါလိမ့် မယ်။
အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲ လုပ်ချင်ကိုင်ချင်တဲ့ သူတွေကိုလူကြီးက ခိုင်းနေတဲ့အတွက် မသိမသာ ဘေးကိုတဖြည်းဖြည်း ချောင်ထိုး ရောက်သွားတတ်ပါတယ်. ဘယ်လုပ်ငန်းမဆို လုပ်ချင်ကိုင်ချင်တဲ့ (Active)ဖြစ်နေတဲ့သူကိုသာ ခိုင်းချင်တတ်ကြပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ဒီလိုလူမျိုးဘာလုပ်ဖို့ ဆက်ပြီး ခန့်ထားဖို့လိုမလဲ??ဆိုတာ စာဖတ်သူအနေနဲ့ တွေးမိမလား။ လုပ်ငန်းမှာ လုပ်သက်လည်းကြာလာတယ်၊ ခန့်ထားမိလျှက်သားဖြစ်နေပြီး စာနာထောက်ထား၍ ဆက်လက်ခန့်ထားရခြင်းများ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအထင်ခံရတာဟာ ဘ၀ရှေ့ရေးအာမခံချက်လည်း နည်းသွားတယ်။ ဘယ်နေရာမှာပဲလုပ်လုပ် ဒီလိုပုံနဲ့ဆို ကြာရှည်ခံဖို့မလွယ်ပါ။
ကျနေ်ာလည်း အရင်တုန်းက အဲ့လိုတွေးမိခဲ့ဘူးတယ်။
ငါက Leader(ခေါင်းဆောင်) မလုပ်ချင်ဘူး နောက်လိုက် (Follower) ပဲလုပ်မယ်ပေါ့၊ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ တာဝန်ခံရတယ်။ နောက်လိုက်ကတော့ ခိုင်းမှလုပ်တယ်၊ ဘာမှတာဝန်ခံစရာမလိုဘူး။ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနေရုံပဲ ဆိုပြီး တွေးမိဘူးပါတယ် ။လက်တွေ့အဲ့လိုလည်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ ဘာဖြစ်လာသလဲဆိုတော့ လုပ်ငန်းမှာကိုယ်ကအရေးမပါတဲ့သူတစ်ယောက်ပုံစံမျိုး လူပိုသက်သက်ဖြစ်လာတယ်။ ခံစားလာရတယ်။
ဒီလိုမဖြစ်အောင်လို့ပါ။ သက်သာရင်ပြီးရော၊ လုပ်ပေးဖို့လည်း ၀န်လေးနေမယ်ဆိုရင် အလုပ်က သင်သွားတယ် ဆိုတဲ့ အရာကိုလုံးဝခံစားလိုက်ရမှာမဟုတ်သလို့ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံဆိုတာ အလကားပဲ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ခုက ပညာတစ်ခုရဖို့လူတွေကိုအောက်မကျို့ချင်ဘူး။ ဆိုတဲ့စိတ်ထား လေးရှိကြတယ်။ ကိုယ်အောက်ကျို့ရမှာက လူတစ်ယောက်ဆီကပဲ အောက်ကျို့ရတာပါ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အဲ့ဒီပညာ၊ လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝကို တတ်သွားရင် ကိုယ့်ဆီကိုလာမေးမယ့်သူက အများကြီးပါ။ အဲ့ဒါကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်မှာ အောက်ကျို့သင့်ရင်လည်း အောက်ကျို့ရမှာပဲ ၊
အထက်လူကြီးဆိုတာ လုပ်ငန်းအားလုံးကို အမြဲတစေ့တစောင်း ခြုံငုံကြည့်နေတတ်ပါတယ်။ ကြိုးစားချင်စိတ်မရှိသူ။ ကူညီလိုစိတ်မရှိသူ၊ အလိုက်သိတတ်မှုရှိမရှိ ၊ အလုပ်ကိုမလုပ်ရရင် သက်သာတယ် လို့ထင်နေတဲ့သူ၊ ကိုယ့်အကျိုးပဲ ကြည့်နေတတ်တဲ့သူကို ဘယ်လူကြီးမှ အားကိုးမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ငယ်ရွယ်ပြီးတတ်တတ်ကြွကြွ ဖျတ်ဖျတ်လတ်လတ်လုပ်နိုင်ချိန်မှာ အလုပ်ကိုမခိုမကပ် လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် မိမိဘ၀ကို လုပ်ငန်းထဲမှာတိုးတက်အောင်ကြံဆောင်သင့်ပါကြောင်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
9:39 AM | Labels: ရင်ကိုဖွင့်တဲ့ " သော့ "
စာမရေးဖြစ်တာလည်းကြာပြီ အခုမှ ပြန်ရေးဖြစ်တာပါ။ ကော်နတ်ရှင်ကလည်းနှေး၊
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လာရောက်ဖတ်ရှုအားပေးသော မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း